U-Frankfurter HOF, iikharaveni eziyi-2, I-WiFi,i-TV, i-cocina, i-terwagen - I-Airbnb
U-Frankfurter HOF, iikharaveni eziyi-2, I-WiFi,i-TV, i-cocina, i-terwagen
Igumbi lakho lokulala e indlu encinci sinombuki zindwendwe onguDámaris
u angahlala kwigumbi elincinci kodwa enento yonke oyifunayo ukuze uchithe ubusuku, unegumbi lokuhlambela eliphakathi egumbini leTV encinci, iWiFi ibe ungasebenzisa ikhitshi nendawo yokubambelela esetyenziswa nangabanye abantu abanokuba zindwendwe. Umahluko esiwenzile kukuba le ndlu ayikho kwindawo ephambili kwaye ikude nabantu abaninzi okukuvumela ukuba uphumle kakuhle, ikwayindawo ethe cwaka kakhulu kwaye inendalo eninzi kunye nomoya ococekileyo.
Ligumbi, elinayo yonke into oyifunayo ukuze uphumle kakuhle, nalo linegumbi lalo lokuhlambela.
Yindawo ezolileyo kakhulu, abamelwane bonke bazinikela emsebenzini, ngokuqhelekileyo akuvinjwa buphango okanye izinto ezinjalo. Isiqingatha sekhilomitha ukusuka, indlela eya e-tsachopen iqala, apho unokuthatha uhambo oluhle kunye neendawo ezikhethekileyo, iintaba, iinkomo kunye namathole azo kunye nokubukela iintaka zasendle.
Uyakwazi ukufowunela inombolo yeselfowuni oyifumana ku-Airbnb emva kokuba ubeke indawo, okanye unokunkqonkqoza kumnyango wethu, indlu ikumgama weemitha ezili-10 ukusuka kwindawo yokulala.